Reer Argentine Dogo, oo ah nooc jacayl kaa dhigi doona: astaamaha iyo daryeelka | Eeyaha Caalamka
Reer Argentine Dogo
Lurdes Sarmiento | | Eeyaha Guud
Cunsurinta loo yaqaan 'Dogo Argentino' waxay asal ahaan ka soo jeedaa Argentina, waddanka tango. Waxaa laga dhihi karaa iyada iyada oo ay weheliso muunada 'Perro Pila Argentino' waa jinsiyadaha kaliya ee dalka ka jira ee wali shaqeynaya.
Taariikhdeeda waxay u dhigantaa sanadkii 1920 markii Dr. Norse Martínez uu raadinayay xayawaan ugaar ah wuxuu soo uruuriyay dhamaan sifooyinkii si uu u helo ugaarsi ugaarsi leh awood sarre leh. Intaa waxaa dheer, magaca waxaa si sax ah u abuuray eeyaha ugaarsiga sidoo kale loo yaqaan eeyaha xoogga badan.
3 Nadaafadda iyo daryeelka
Noocan waxaa lagu gartaa inuu yahay muunad weyn marka laga hadlayo muuqaalkeeda badanaa waa mid adag oo adag. Dhogortiisa waa cadaan taas oo ka dhigaysa mid aad u qurux badan, sidoo kale waa mid gaaban oo leh dhibco madow taas oo laga arki karo muuska iyo dhegaha.
Aad ayuu u firfircoon yahay sidaas waxay u baahan tahay socod dheer dhowr jeer maalintii ilaa uu ka daalayo, in kasta oo markaa ay ku adag tahay inuu guriga mar kale soo galo.
Tababbarka socodka dheer waa inuu noqdaa mid joogto ah maxaa yeelay waa muunad aad u firfircoon. Haddaad dayacdo qaybtaas, Noocani eeygu ma laha waddo uu ku soo gudbiyo tamartiisa wuuna qaadi karaa walwal iyo xitaa dagaal badan. Ma ahan dabeecadaada laakiin waa inaad sii deysaa culeyska dabeecadaada.
Adoo yeelanaya dabeecad cadaalad ah, waxay ka dhigeysaa qeyb ka mid ah tababarka joogtada ah mid aan isku qasaneyn, sidaas darteed tababaridoodu waa fududahay.
Sida astaamaha guriga, waxay la qabsadaan dhammaan noocyada iyaga ka mid ah. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, eeygan eygu wuxuu si wanaagsan ula dhaqmaa dadka iyo xayawaannada kale, laakiin waa inaad tixgelisaa sidoo kale Waad xoogaa shaki gelin kartaa dadka aadan aqoon.
Marka laga hadlayo isdhexgalka eyda kale, waxay noqon kartaa xoogaa xoog badan, tani macnaheedu maahan inaysan si wanaagsan ula macaamili karin iyaga. ma jecla inuu caajiso. Culeyskiisu wuxuu u dhexeyn karaa 40 iyo 45 kg, midabkiisu waa cadaan celcelis ahaan cimrigiisuna wuxuu gaari karaa ilaa laba iyo toban sano.
Isagu waa nin aad u daacad ah oo feejigan dabeecaddiisa, xoogaa shaki ah shisheeyaha iyo xiriir qoys oo adag. Xaaladaha dhaliya nasashadan ayaa xaqiiqdii saamayn ku leh xaaladdaada shucuureed.
Waxay leedahay indho feejignaan leh, indhuhu waa midab madow, wey kala fog yihiin midba midka kale waxayna leeyihiin qaab oval ah. Dhegaha dhaqan ahaan waa la gooyaa in la siiyo qaabkaas saddex-geesoodka ah, in kastoo waddamo badan ay xilligan mamnuucayaan dhaqankan.
Iyada oo qayb ka ah tababarka waa in la ogaadaa taas kani waa eey aad u ciyaar badan, si ay u yeelato astaamaha lagama maarmaanka u ah inay hayso shirkadda ugu yar shirkadda guriga.
In kasta oo xaqiiqda ay dabeecaddeeda ka duwan tahay jinsiyadaha kale, iyada oo hab bulsho loo wadaago si sax ah Wuxuu awoodi doonaa inuu la falgalo eeyaha kale. Isbaanishka waxaa ka jira farsamooyin tababbar oo fara badan oo u dhexeeya barashada shaqsi ilaa farsamooyinka kooxeed
Tababbarka waa in lagu fuliyaa xaalad aad u deggan oo jawi wanaagsan leh, waxaas oo dhan ka sarreeya, waa inay jiraan qiimayaal adag oo guriga ka jira.
Dabcan eey waa lagama maarmaan in loo caddeeyo jagada uu ka hayo guriga gudihiisa, Tartankan noocan ahi waa mid aad u caqli badan laakiin sidoo kale wuxuu ku dhiiranayaa inuu noqdo mid aad u khiyaano badan, xusuusnow inay ku dhasheen guulwadayaal.
Eygan wuxuu jecel yahay in la dawarsado wuxuuna jecel yahay inuu tijaabiyo ilaaliyayaashiisa, laakiin taas waan kuu xaqiijinayaa waxay fahmaan amarada oo dhan.
Isaguba waa ciyaartooy weyn sidaa darteed wuxuu wehel weyn ku noqon karaa hawlo kala duwan, in badan oo banaanka ka taagan halkaasoo runtii ay ka muuqato awooddeeda, waana taas oo ay weli tahay eey ugaarsi ah.
Muunadani waa mid aad ugu nugul xadgudubka iyo qaylada, markaa xitaa ha ka fikirin inaad ku ciqaabto jir ahaan (noocani iyo nooc kasta oo xayawaan ah). Waxay jecel yihiin in lagu abaal mariyo dhaqankooda, tan waxaa si togan loogu xoojiyay habdhaqanka. Sidan oo kale, waxaa isaga u suurtagal ah inuu si dhakhso leh wax u barto, isagoo eyga xasiloon oo faraxsan.
Waxaad u isticmaali kartaa farsamooyinka sixitaanka si isdaba-joog ah iyo soo noqnoqosho leh, laakiin edeb leh. Isku day inaad isticmaasho farsamooyinka jirka halkii aad ka isticmaali lahayd kuwa afka ah, kaliya munaasabadaha gaarka ah waxaad isticmaali kartaa cod adag oo cod ah.
Sidee fudud u caajisay kalfadhiyada waxbarashadu waa inay socdaan ugu badnaan 15-20 daqiiqo.
Kala duwanaanshaha howlaha, ciyaaro ciyaaro kala duwan oo ay ku jiraan madadaalo iyo shaqooyin caadi ah. Haddii aad beddesho, waxaad ogaan doontaa in eeyga uu ku falcelin doono xamaasad halkii aad iska indho tiri laheyd inay yihiin caajis, waa wax aan caadi aheyn laakiin isagu waa sidaas oo kale!
Waxaan mar kale ku xasuusinaynaa in tababbarkaagu noqdo mid daran, waa inaad isku daydaa jimicsi badan si aad u noqotid nooc aad u firfircoon waxayna u baahan tahay nasasho badan iyo xasilooni.
Sidee eey ugaarsi ah u tahay iyo haddii uu ku guuleysto xiriir qoys, haddii aad u fiirsato wax la yaab leh waxay u egtahay inaad ilaaliso adigoon xitaa ka fikirin. Waa inay ahaataa mid bulsheed markay yihiin eeyo, tani macnaheedu maaha inaan lagu qaban karin qof weyn, laakiin way fududahay in lagu sameeyo da 'yar.
Nadaafadda iyo daryeelka
Muunadani guud ahaan waa eey aad u caafimaad qaba oo xoog badanMaaha wax aad u badan in la arko isaga oo jiran, laakiin waa inaad had iyo jeer taxaddar yeelataa. Waxa ugu caansan ee ay soo bandhigi karto waa dysplasia sinta iyo sidoo kale dhibaatooyinka wadajirka ah, laakiin nafaqadaas ayaa lagama maarmaan ah. Xusuusnow inay u muuqdaan inay miisaan culus leeyihiin!
Aad ayey muhiim u tahay inaad u tagto dhakhtarka xoolaha si joogto ah si aad u xakameyso, waxaa jira caddaymo kiisaska nuqulo ka mid ah Argentine Dogo oo leh xaaladaha dhagaha la'aan.
Maqaarkoodu waa mid aad u xasaasi ah waxayna u nuglaan karaan gubasho halis ah oo ka timaadda qorraxda oo muddo dheer qaadata. Sidoo kale markaad socotid inta lagu jiro jimicsigaaga maalinlaha ah Ka taxaddar si aadan u qaadin shilinta ama dulin kale.
Waa inaad cadayato badanaa inaad wasakhda ka saarto, dhowr jeer bishii ayaa ka badnaan ku filan. Nadaafaddiisa indhaha, afka iyo dhegaha ayaa lagama maarmaan u ah si ay u noqoto mid caafimaad qabta oo qurux badan.
Wax kale oo aad muhiim u ah ayaa ah waa inaad daryeeshaa indhihiisa, oo leh nadiifin maalinle ah si loo yareeyo halista caabuqa sababtoo ah sharka 'indhaha biyaha leh'.
Marka la soo koobo, noocani ma ahan mid dagaal badan gabi ahaanba, waa kuwo la jecel yahay oo aad u xanaaneeya carruurta. Tani waa Dogo Argentino caan ah, adag, deggan, geesi ah, wehel wanaagsan iyo xitaa dulqaad adigoon ilaawin inuu yahay ilaaliye weyn reerka maxaa yeelay wuxuu yeeshaa xiriir adag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Reer Argentine Dogo